Soosaarayaasha dhoobada Luminescent - Shirkadaha Shiinaha Farshaxanka dhoobada Luminescent & Warshadaha
Mobil dhagaxa bulukeetiga leh ee loo yaqaan 'holistic luminescence pebble mosaics'. Qaabka loo yaqaan "Cobblestone qaabka" sida loo yaqaan 'cobblestone' ' Waa sunta sunta ah ee aan sunta lahayn ee lagu ilaaliyo bay'ad ilaalinta deegaanka, wuu awood karaa ...
Laydhka muraayadaha laambada leh ee iftiinka leh, soosaarida alaabada, si aad ugu habboon mashruucaaga nalka leh ee nalalka ku shaqeeya iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad gaar ah oo la adeegsado. Qaabka cobblestone ee loo yaqaan 'cobblestone qaabka' Waa sunta sunta ah ee aan lahayn sunta shucuureed ee ilaalinta deegaanka ...
Mosaics galaaska iftiinka Ku iftiimiya muraayadaha muraayadaha iftiinka ah ee iftiinka leh ee iftiinka dheer ee habeenkii, waxay kuxiran yihiin tamarta iyo ilaalinta deegaanka, Taasi waxay muujineysaa midabka mosaiciga dabiiciga ah maalintii ama xaalad culus oo dhalaalaya, midab khafiif ah iyo midab cad oo la heli karo, waxay dhalaali karaan midab hurdi-cagaaran iyo buluug-cagaar iyo sidoo kale cirro-buluug iwm gudcurka. Waxay ku sii hayn karaan gudcurka gudcurka muddo ah 8 ilaa 12 saacadood ka dib markay nuugaan qiyaastii 15-25 daqiiqo ka yar iftiinka maalinta ama iftiinka adag. Iftiin dhan
Xalaasha dhoobada nalka leh waa badeecad nal iftiin leh oo loo isticmaali karo aqoonsiga amniga iyo qurxinta dhismaha. Codsiga aagag kaladuwan waxay noqon karaan derbiga, sagxadda, jaranjarooyinka iyo shaqo farshaxan oo ku taal maktabadda. Qaar badan oo ka mid ah dhoobadayada iftiin ee iftiinka leh ayaa sidoo kale ku habboon dhismaha oo isku daray hab-socodkii caadiga ahaa ee shaqada iyo tikniyoolajiyadda casriga. Waxay soo bandhigaan saameynta iftiinka waarta, antiseptik, waarta, iyo xasilloonida kiimikada. Markaad nuugto waxoogaa iftiin muuqda sida iftiinka qorraxda tooska ah 10-20 daqiiqo, oo si iskiis ah u shid 8 saacadood ~ 12hours. badeecaduhu maahan oo keliya ujeeddada qurxinta laakiin waa tixgelinta amniga sidoo kale.
Qalabka dhagaxa bulukeetiga leh ee bullaacadda leh oo leh sawir alwaax xawaare sare leh ayaa loogu talagalay qurxinta heer sare ah oo heer sare ah oo loo adeegsaday, waxaa loo sameeyay derbiyada ama qurxinta hoolka, qolka musqusha, qolka jikada, ama naadi gaar ah, qurxinta barxadda iwm, gaar ahaan waxaan ku tilmaami karnaa wax soo saarka iyadoo loo eegayo shuruudaha kala duwan. Dhibcaha iibka guud ahaan: Naqshadeynta miraayadda casriga ah oo lagu daray dhalaalaya mugga Magaca Caddaynta Magaca Liinta dhalaalaya tifatiraha nalka nalka nooca Pebble sawir Sawir caan ah 30 ...
Dhagxaanta laambadda leh ee loo yaqaan 'lebble dhagax' iyo mobleic-guluubka laambada-dhalaalaha leh: Mosaic-gu wuxuu ka samaysan yahay iftiinkayaga ku jira tiirarka mugdiga ah, nalalka-dabiiciga ah ee iftiinka leh ee loo yaqaan 'guluubka' ayaa ku shaqeeya glaze-ka sidii shey cayriin ah, ku dar walxaha nalalka leh ee loo adeegsado tikniyoolajiyadda khaaska ah. Qaabka loo yaqaan "Cobblestone qaabka" sida loo yaqaan 'cobblestone' ' Waa sunta sunta ah ee aan sunta lahayn ee lagu ilaaliyo ilaha ilaalinta deegaanka, wuxuu gali karaa qulqulka ubaxa iyo bonsai, waxaana lagu sameyn karaa mosaic ka samaysan loo isticmaalo wa ...
Photoluminescent glaze tile guryaha guryaha nalka iftiinka leh waxay ka dhigayaan tiirarka mid soo jiidasho leh. Wax sun ah, ma jiraan waxyaabo waxyeelo leh, hawli majiraan .Shaqanka dusha sare, sii xajista astaamaha taleefyada caadiga ah, fududahay in la isticmaalo. Iftiimin: Jell-cagaar, buluug-cagaaran, Sky-buluug .Daa'iidooyin gaar ah ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Waxaa jira afar nooc oo iftiimiya taaylka mugdiga ah ee caanka ah: 1. Hal dillaac dhalaalaya dhoobada sibidhka 2. Diiran oo dhalaalaya oo leh daabacaadda gargaarka .. .